Edgar Allan Poe Biography na Akwụkwọ kacha mma | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Berkwụ Alberto | | Ndị edemede, Akwụkwọ, Akwụkwọ, ọtụtụ
Mgbe anyị banyere egwu ma ọ bụ akwụkwọ akụkọ sayensịỌ bụ mmadụ ole na ole na-echeta eziokwu ahụ bụ na ọ dị mgbe ọ bụla onye edemede nwere obi ike ịgafe ókèala ụfọdụ ma zọọ ụdị pụrụ iche n'oge nnukwu mgbanwe akwụkwọ. N'agbanyeghị ndụ aha ọjọọ, American Edgar Allan Poe na-aga n'ihu akwụkwọ banyere akwụkwọ ozi ọjọọ na obere akụkọ nakwa ihe atụ nke ndị edemede ahụ niile nwere obi ike ibi naanị na akụkọ ifo. Ka anyị gagharịa na Edgar Allan Poe biography na akwụkwọ kacha mma iji mara ihe nzuzo nke ọkachamara a gbara ọchịchịrị.
1 Edgar Allan Poe Biography
2 Akwụkwọ Edgar Allan Poe kacha mma
2.1 Arthur Gordon Pym na-akọ akụkọ
2.2 Nwa ojii
2.3 Ahụhụ Ahụhụ
2.5 Akụkọ zuru ezu
Edgar Allan Poe osise. Site Edouard Manet.
Amụrụ na Boston na Jenụwarị 19, 1809, E mere Edgar Allan Poe baptism mgbe ọ gachara agwa gosipụtara na King Lear nke William Shakespeare. Mgbe mgbapụ si n'ụlọ nna ya mgbe Poe dị naanị otu afọ na ọnwụ nke nne ya na ụkwara nta otu afọ mgbe e mesịrị, Edgar jere ụwa na-ebu foto nke ndị mụrụ ya dịka naanị ncheta a na-ahụ anya banyere mmalite ya. Mgbe nne na nna ya ochie, Rosee kpọọrọ nwanne ya nwanyị, bụ Poe emechiri alụmdi na nwunye nke Frances na John Allan, onye ọ natara akwụkwọ na United Kingdom tupu ọ laghachi na Richmond (Virginia) na 1820.
Ugbua n’afọ iri na ụma ya, Poe gosipụtara nkà mmụta edemede ya na-edegara nne nwa klas ya aha ya bụ "To Helen", tụlee ịhụnanya ya nke mbụ. N'ime oge a, nwatakịrị ahụ gbara ọchịchịrị na-etolite enweghị ntụkwasị obi na ụdị ọdịdị ya bụ onye chọtara n'akwụkwọ ma ọ bụ ọchịchọ ya maka ịkọ akụkọ iji nweta ike n'ebe ndị ọzọ nọ bụ ndị ọ na-ekewapụ onwe ha. Ugbua n'oge mahadum ya, agwa ahụ mechara kọwaa nwoke kwenyere na ya nwere ezigbo ihe ọmụma n'agbanyeghị ihe dị mkpa karị. Ọchịchọ ga-ebelata mgbe nna nkuchi ya enweghị ike ịkwụ ụgwọ nke Poe na-eto eto wee kwụsị ịgba akwụkwọ ya ka ọ bụrụ onye agha na Boston. N'oge ọrụ agha ya, o dere akwụkwọ abụ abụọ, nke atọ na-esote ya, nke ndị ọrụ ibe ya kwụrụ ụgwọ, nke e bipụtara na New York, ebe Poe gbapụrụ n'ọkwá ndị agha ya iji wuo ọrụ dị ka onye edemede.
N'ezie, Poe ghọrọ onye edemede mbụ malitere ibi naanị na akụkọ ifo, ebumnuche gbagwojuru anya n'ime afọ iri nke 1830 nke nsogbu akụ na ụba metụtara mpaghara edemede. Mgbe nweta ihe nrite maka obere akụkọ ya Ihe odide edere na karamaPoe kwagara Baltimore, ebe ọ lụrụ nwa nwanne nna ya bụ Virginia Clemm, bụ onye dị nanị afọ iri na atọ. N'ịbụ onye e kewapụrụ site na nna nna nkuchi nke mmekọrịta ya ga-egosipụta akara dị ala nke Poe gbalịrị iji ụgwọ ya na-agụ ya, ọ malitere ide na akwụkwọ akụkọ Richmond nke mgbasawanye ya ruru n'ihi aha onye edemede, nyocha ya na akụkọ Gothic ya, ụdị mgbe amaghi ya na West. Otú ọ dị, n'oge ahụ nsogbu ya banyere mmanya na-ama ama.
N'ime afọ ndị sochirinụ, Edgar Allan Poe jikọtara oge nke nnabata dị ukwuu karị: site na ịjụ onye nkwusa New York na nke ya obere akụkọ anthology Akụkọ banyere Folio Club na-atụle ya usoro na-abụghị nke azụmahịa n'oge ahụ, ruo ọnwa ole agụụ na-agụ na ezumike nka na Pennsylvania ma ọ bụ mmepe nke akụkọ ndị uwe ojii na Graham Magazine, nke mere ka ezinụlọ nwee ike ibi otu n'ime oge akụ na ụba kacha mma.
Agbanyeghị, ọnwụ Virginia site na ụkwara nta na 1847 mere ka Poe daa mbà n'obi nke mmanya na laudanum riri nke ga-akwụsị ndụ ya na Ọktoba 3, 1849, ụbọchị nke onye edemede ahụ A chọtara ya n'ọgba aghara n'okporo ámá Baltimore awa ole na ole tupu ọnwụ ya.
Akwụkwọ Edgar Allan Poe kacha mma
Tupu ịga n'ihu, ekwesịrị icheta na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọrụ Poe niile sitere na akụkọ, akụkọ ndị dị na akwụkwọ ahụ n'oge ahụ ma tinye ya na akụkọ ọdịnala dị iche iche n'afọ ndị na-esote. N'ụzọ dị otú a, anyị na-enyocha ọrụ kachasị mma nke onye edemede site na akụkọ ya na naanị akwụkwọ akụkọ ya.
Arthur Gordon Pym na-akọ akụkọ
Edgar Allan Poe bụ naanị akwụkwọ akụkọ E bipụtara ya na nkeji obere na 1938, na-ebute otu n'ime ọrụ kachasị ederede nke onye edemede. Otu nkata na-eduga anyị n’oké osimiri nile nke Arthur Gordon Pym na-adaba na whaler Grampus. Ọtụtụ ndị mmadụ na ụgbọ mmiri ndị na-eduga n'agha ahụ ịchọ azịza, ike gwụrụ ịdị adị ya, n'ala ndị dịpụrụ adịpụ na nke Antarctica. Dị ọcha n'ike mmụọ nsọ n'ihi na-eso ụzọ nke na-ede akwụkwọ dị ka Lovecraft, akwukwo a gara n’ihu bu otu n’ime akuko akuko Poe kacha mara nma.
Ọ ga-amasị gị ịgụ Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla.?
E bipụtara ya na 1843 na mbipụta Philadelphia Saturday Evening Post, Nwa ojii nwere ike Poe kasị ama akụkọ na otu onye kwesiri ntukwasi-obi nke eluigwe ojoo na ochichiri. Akụkọ a kpọgara anyị n'ụlọ otu di na nwunye na-akatabeghị ahụ kuru nwamba, anụmanụ nke di ya gburu n'oge mmanya na-egbu ya. Ọdịdị nke pusi nke abụọ ga-ebelata nkwekọ ezinụlọ, na-eduga akụkọ banyere nkwupụta nke na-egosipụta njirimara nke akụkọ a na-egosipụta akụkụ nke ọnọdụ nke Poe bi na mmetụta dị ka iwe, ihe ọjọọ ma ọ bụ iwe.
E bipụtara na 1843 na Akwụkwọ akụkọ Dollar Philadelphia, Ahụhụ Ahụhụ na-agwa nzukọ nke otu enyi nke William Legrand nke owu na-ama ya na Jupiter ohu ya na agwaetiti dị nso na Charleston ebe ha na-egwupụta akwụkwọ mpịakọta ezoro ezo nke na-ekpughe ebe akụ onye paireti dị.
Bụrụnụ onye na akara ngosi nke Poe eluigwe na ala na isi ọrụ mere ka mba ụwa nabata ya, Achọpụtaghị ngwaahịa ọ bụla. bụ uri a bipụtara na 1845 na New York Evening Mirror. N'ịbụ onye nwere ọnọdụ ọjọọ na asụsụ edepụtara edepụtara, ọrụ ahụ na-akọ banyere nleta nke igwe mmadụ na windo nke onye na-eru uju na-eru uju, ihe ịrịba ama nke ọdịda protagonist na hel n'onwe ya.
Ọ bụrụ na ị na-achọ akụkọ ọdịnala nke na-achịkọta akụkụ nke ọrụ Poe, mbipụta ya Akụkọ zuru ezu bipụtara Penguin chịkọtara Ọrụ 72 nke onye edemede, gụnyere mmalite na mkpokọta ya Akụkọ banyere Folio Club na Tales of the Grotesque na Arabesque, tinyere akụkọ asaa a na-agbabeghị ebi n’asụsụ Spanish.
Kedu ọrụ Poe kachasị amasị gị?
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Akwụkwọ » ọtụtụ » Edgar Allan Poe Biography na Akwụkwọ kacha mma
Mgbe ya na Javier Alonso García-Pozuelo na-ekwu okwu, onye edemede nke La cajita de snuff